FromLinux ee PPT (Mashruuca Dhiirrigalinta Teknolojiyada) | Laga soo bilaabo Linux
Laga soo bilaabo Linux ee PPT (Mashruuca Dhiirrigalinta Teknolojiyada)
Waa hagaag markaan idhaahdo Laga soo bilaabo Linux Waxaan ula jeedaa kiiskan KZKG ^ Gaara iyo aniga, laakiin muhiimadu waxay tahay inaan joogno halkaasna waxaan u sheegnay inay wax walba socdaan.
PPT (Mashruuca Dhiirrigelinta Teknolojiyada) waa mashruuc ka kooban dhacdooyin taxane ah oo ay soo qabanqaabisay Jaamacadda Culuumta Kombuyuutarka ee Cuba (UCI), halkaas oo ujeedadu tahay kor u qaadista iyo wadaagga codsiyada (qaarna bilaash ma ahan), aqoonta, iwm.
Wiilasha ka aadanaha (Beesha UCI Software Free) iyo dabcan, xubnaha Beesha Firefox ee Cuba, oo aan la wadaagno xoogaa oo aan ku beddelanno codsiyada FirefoxOS.
Waxaa jiray marti ka timid dalal kale sida Talyaaniga oo xiiseynayay Firefox OS, ardayda ka socota jaamacadaha kale, ardayda ka qalin jabisay UCI ee sida dhow u wada shaqeeya, iyo guud ahaan dadweynaha, kuwaas oo inta badan xiiseynayay wax soo saarka Mozilla.
Hindisahani waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay nooc kasta oo qof ah, iyada oo aan loo eegin xirfaddiisa, wuu u dhowaan karaa waxna ka baran karaa Software Free, Mozilla, Firefox OS iyo sida aad ku arki karto sawirrada, waxaad horayba u arki kartaa qaar ka mid ah taleefannada la heli karo.
Sawirro badan oo Dhacdada ku saabsan boostada Firefoxmania.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Laga soo bilaabo Linux ee PPT (Mashruuca Dhiirrigalinta Teknolojiyada)
Runtii booqashadu waxay ahayd mid aad u xiiso badan oo hadal dheeri ah la yeelatay xubno ka tirsan bulshada Mozilla Community of Cuba.Waxaan nasiib u helnay inaan sidoo kale la wadaagno aqoon iyo khibrado qaar ka mid ah sida Juneer ama Erick oo ku yaal Lima, oo aan ku arko Elav sawirka.
Ku jawaab noctuido
Haa, waan garaneynay Erick iyo inta hartay dhowr sano hada, runti daqiiqado kahor intaadan qaadan sawirkaas waxaan xasuustaa inaan si sax ah kaaga hadlayno 😀
Haa, waa run .. 😀
Xiiso leh ... Sida muuqata, kuwa ka yimid Mozilla Peru macno ahaan waxay xiriir la leeyihiin bulshada inteeda kale ee Mozilla.
Ceeb xumo maaha inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku booqato oo aad u awoodo inaad wareysato (oo jidka ag fadhido, fiiri sida internetku runti uga shaqeeyo Cuba).
Waxay ila tahay aniga ila fiican in noocan dhacdooyinka la qabto. Waxaan fursad u helay inaan kaqeyb galo shirka softiweerka bilaashka ah ee gobolka iyo FLISOL, waxaana jira waxyaabo xiiso leh
Ma noo sheegi kartaa waa kuma kan adiga? Waxaan u maleynayaa midka boorsada fuchsia leh inuu yahay Elav iyo midka isaga ku xiga ee funaanadda buluugga ah ee KZKG ^ Gaara.
Hagaag, ma aqaano waxa midabka fuchsia yahay laakiin ... midka boorsada casaanka / casaanka leh, haa, waa elav, oo sax, anigu waxaan ahay kan leh buluugga buluugga ah ... hadda markaad eegtay at it, maahan mid kamida sawiradayda ugu fiican HAHA
Si loo cusbooneysiiyo sawirada qeybta "Yaan nahay", ayaa la yiri.
Hadda, kaftanka dhinac, waxaan jeclaan lahaa inay soo geliyaan fiidiyowyada dhacdada la sheegay iyagoo adeegsanaya durdur (fahamka sida aan caadiga ahayn ee qaybinta ballaadhinta ay ugu taal dhulka Celia Cruz), oo markaa aan awood ugu soo dejiyo Vimeo.
Ka dib oo dhan, waxaan helay cusbooneysiin Iceweasel shalay, taas oo ahayd qalad cilad sida ugu dhakhsaha badan ee aan u aqrinayo maqaalkan.
Salaan. Halkan jawaabta: https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsia
Waad qiyaasaysaa sax !! 😀
Che, in lugta Argentine ee DL la la'yahay! 🙂
Nah, si dhab ah ulations hambalyo! Waxay u muuqdaan kuwo aad ugu faraxsan FirefoxOS-kooda.
Midka ku xiga waxaan kugu martiqaadeynaa (oo tikit diyaaradeed lagu daray) XDDD
Waxaan rajeyneynaa Cuba, qormooyinka internetka ma dhigayaan nooca Firefox ee imanaya ikhtiyaar la'aan baasaboorka (riyo maalmeedka taringuero kasta).
Su'aal ii cadee aniga ... Waan fahamsanahay inaad horeyba internet bilaash ah uga heli jirtay jasiiradda laakiin
Ma loo oggol yahay gelitaanka guriga ama ma inay aadaan meel fagaare ah? ma jiraan meelo kulkulul oo lagu xiro wifi? Ugu dambayntiina marinku runtii waa bilaash mise waa la sifeeyey ???
Ku jawaab Alexis
Adeegga Tusaha ee LDAP : OpenLDAP (II)
Ku samee shaashad shaashad ama shaashad GIF ah